Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, December 22, 2010 Wednesday, December 22, 2010 Labels: ရသစာစုများ
ဒီဇင်ဘာလရဲ့ ၁၆ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ သူ့ရဲ့ ၇၅နှစ်မြောက် မွေးနေ့ကိုကျင်းပပြီးချိန်မှာတော့ လက်ရှိ သူဦးစီးနေတဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဥက္ကဌ လုပ်ငန်းတာဝန်ကနေ အနားယူဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်..
သူ့ဘ၀မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဇနီးနဲ့ လက်ထပ်ပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့သလို သားသုံးယောက်ကိုလည်း လူလားမြောက်ပြီး ပညာတတ်တွေဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့တယ်.. မိသားစုပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလည်း ကြီးကျယ်ဖြစ်ထွန်းလာအောင် သူလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်… ခုချိန်မှာတော့ အသက်အရွယ်အရ သူအနားယူဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ… သူဟာ သန်မာဖြတ်လတ်တဲ့ သူ့ရဲ့ ခွန်အားတွေ၊ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ဥာဏ်ပညာတွေ၊ သူ့ဘ၀ရဲ့အချိန်တွေကို မိသားစုအတွက်၊ စီးပွားရေးအတွက် အကျိုးရှိစွာ သူအသုံးချခဲ့ပြီးပြီ.. အခုတော့ သူဟာ အသက်ကြီးကြီး ချည့်နဲ့နဲ့ လူအိုတစ်ယောက် ဖြစ်နေခဲ့ပြီ… သူ့ကျန်းမာရေးဟာလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကစလို့ ချုချာလာခဲ့ပြီ.. သူ အရင်ကလို အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့… ဒီတော့ သူ့လုပ်ငန်း၊ တာဝန်တွေကို သူ့ရဲ့ သားတွေလက်ထဲ လွှဲပြောင်းပေးဖို့ သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။
အလုပ်တာဝန်ဆိုတာ ကိုယ်တတ်နိုင်ချိန်မှာ စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကိုယ်မတတ်နိုင်တော့ချိန်၊ ကာယအင်အား၊ ဥာဏအင်အား ချို့ယွင်းလာချိန်မှာတော့ သင့်တော်တဲ့သူလက်ထဲကို လွှဲအပ်ပေးရတော့မှာ လောကရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုဘဲ မဟုတ်ပါလား.. ဒီတော့ ကိုယ်တာဝန်လွှဲအပ်မဲ့သူဟာ အရည်အချင်းရှိသူ ဖြစ်ဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်.. မဟုတ်ရင် သူကြိုးစားပြုစုပျိုးထောင်လာရတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာ အရည်အချင်းမရှိသူ လက်ထဲသာ ရောက်သွားခဲ့ရင် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမလာဘဲ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နိုင်တယ်… ဒါတွေကို သူသေချာတွေးမိပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ သူ့မှာက သားသုံးယောက်ရှိလေတော့ ဘယ်သားကို အခုလက်ရှိ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ ဦးစီးဦးဆောင်ဖြစ်တဲ့ သူ့နေရာ ဥက္ကဌအဖြစ် လွှဲအပ်ရင် သင့်တော်မယ်ဆိုတာ အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားနေခဲ့တာ အတော်ကိုကြာပါပြီ.. သူ လူရွေးမမှားချင်ပါ။ အငယ်ဆုံးသားကိုတော့ အချစ်ဆုံးမို့၊ အကြီးဆုံးသားကိုတော့ လိမ္မာလို့၊ သားအလတ်ကိုတော့ သနားလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ မျက်နှာလိုက်ပြီး၊ ဘက်လိုက်ပြီးတော့လဲ ဘယ်တစ်ယောက်ကိုမှ အကြီးအကဲ ရာထူးကို သူက မပေးခဲ့ချင်ပါ။ ထိုက်တန်တဲ့ အရည်အချင်းရှိသူကိုသာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ် သူရွေးချယ်ခဲ့ချင်ပါတယ်.. ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ထိုက်တန်တဲ့ အရည်အချင်းတော့ ရှိရမယ် မဟုတ်ပါလား ။
သူကိုယ်တိုင် ကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ သူ့သား သုံးယောက်လုံးဟာလည်း အရည်အချင်းကိုယ်စီ ရှိကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်.. သူ့လုပ်ငန်းတွေမှာ အသီးသီး ၀င်လုပ်နေကြတာမို့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေလည်း ရှိနေပြီးသား၊ ဒီလုပ်ငန်းကြီးကို ဆက်လက်ပြီး တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြမဲ့ အရည်အချင်းကိုယ်စီလဲ ရှိနေကြပါတယ်.. ဒါကို သူလည်း ကောင်းကောင်းတွေ့နေ၊ မြင်နေခဲ့သလို သိလည်း သိနေခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ သူတို့မှာရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြဘဲ ကွဲပြားခြားနားကြပါတယ်.. ဒီတော့ ဘယ်သူဟာ ဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ အကြီးအကဲတာဝန်နဲ့ ပိုပြီးထိုက်တန်မလဲဆိုတာ ရွေးချယ်ဖို့တော့ သူ့အတွက် အနည်းငယ် ခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်… ခုချိန်မှာ သူ့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးက သူအနားမယူခင်မှာ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကို ဦးဆောင်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရွေးချယ်ပေးခဲ့ဖို့သာ။
သူ့မိသားစုတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ စုံညီစွာနဲ့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့ကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာဘဲ သူလုပ်ငန်းတာဝန်ကနေ အနားယူတော့မှာဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ကြေငြာလိုက်ပါတယ်.. အဲဒီခါမှာ သူ့သားတွေထဲက တစ်ယောက်က “ဖေဖေ… ဖေဖေ့လို ဦးဆောင်သူမရှိဘဲ ဒီကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုလုံး ဘယ်လိုများ ရှေ့ဆက်သွားမှာလဲ.. ကျွန်တော်ဖြင့် စဉ်းစားလို့ကို မရပါဘူး.. ” လို့ ပြောလာသလို နောက်သားတစ်ယောက်က “ ဖေဖေမရှိရင်တော့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့ တော်တော်တော့ခက်ခဲမှာ အမှန်ပါဘဲ.. ဒါပေမဲ့ ဖေဖေလည်း အသက်ကြီးပြီဆိုတော့ အနားယူဖို့လိုတာလည်း မှန်ပါတယ်” လို့ပြောလာသလို နောက်သားတစ်ယောက်ကတော့ “ ဖေဖေနဲ့ ဒီကုမ္ပဏီဆိုတာက ခွဲခြားလို့ မရနိုင်ပါဘူး ဖေဖေရယ်” လို့ ပြောလာပါတယ်.. ပြီးတော့ သူတို့ သားအဖတွေကြားမှာ ရုတ်တရက် တိတ်ဆိတ်ခြင်းက ကြီးစိုးလို့ သွားခဲ့တယ်.. သေချာပါတယ်.. ခုချိန်မှာတော့ သားသုံးယောက်လုံးရဲ့ အတွေးထဲမှာ “ဖခင်နေရာကို ဆက်ခံမဲ့သူက ဘယ်သူဖြစ်မလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုယ်စီကို တွေးနေကြတော့မှာပါ။
ဒီကိစ္စအတွက် သူ့မှာ အစီအစဉ်တစ်ခု ရှိနေခဲ့ပါတယ်.. ဒီပြဿနာကို သူဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်.. သူ ထိုင်နေရာကနေ ထရပ်လိုက်ပြီး အခန်းရဲ့ထောင့်ဘက်ကို လျှောက်သွားခဲ့ပါတယ်.. အဲဒီမှာတော့ သေတ္တာလေး သုံးလုံးရှိနေခဲ့ပါတယ်.. သူ့သားတွေဘက်လှည့်ပြီး ပြောလိုက်တာက
“ကဲ.. သားတို့သုံးယောက် ဒီကိုလာပြီး တစ်ယောက်ကို သေတ္တာတစ်လုံးစီ လာယူကြပါ… ဒီသေတ္တာသုံးလုံးဟာ အရွယ်အစား အတူတူ ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်.. ဒီနေ့ကစပြီး နောက် မကြာခင်ရောက်လာမဲ့ နှစ်သစ်ကူး ပထမဆုံးရက်မှာ ဒီနေရာမှာ ဖေဖေတို့ပြန်ဆုံကြမယ်.. ဖေဖေရဲ့ ဆန္ဒကတော့ ဒီသေတ္တာလေးထဲကို ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးမှာ သားတို့ တန်ဖိုးအထားဆုံး၊ အရေးအကြီးဆုံးလို့ ယုံကြည်တဲ့ အရာတွေကို ပြည့်အောင်ဖြည့်လာခဲ့ကြစေချင်တယ်.. သားတို့ အရေးကြီး တန်ဖိုးအထားဆုံးလို့ ယုံကြည်ပြီး ရွေးချယ်လာတဲ့အပေါ် ဘယ်သူဟာ ကုမ္ပဏီရဲ့ အကြီးအကဲ ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာ ဖေဖေက ဆုံးဖြတ်မယ်” လို့ သူပြောလိုက်ပါတယ်… အခန်းထဲကနေ သူထွက်ခွာလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ စကားသံတွေ၊ ဝေဖန်သံတွေ၊ ဆွေနွေးသံတွေနဲ့ အခန်းဟာ ဆူညံပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်..
နှစ်သစ်ကူးဖို့ ၁၅ရက်သာ လိုပါတော့တယ်… ဒီကြားထဲမှာ သူ့သားတွေကို အကဲခတ်ရသလောက် သားတစ်ယောက်ကတော့ သေတ္တာကြီးထဲ အဖိုးတန်ပစ္စည်းရှိနေတဲ့ပုံနဲ့ သူသွားလေရာနီးပါး သယ်ယူသွားလေ့ ရှိသလို၊ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ စာရင်းအင်းဌာန တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြေးလွှားနေပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းနေတာကို သူတွေ့ရပါတယ်… နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ သူ့ရဲ့သေတ္တာကို သူ့စားပွဲအောက်မှာ ထားထားပြီး ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား လုပ်တာ ကိုင်တာမတွေ့ရဘဲ ပုံမှန်အတိုင်း သူလုပ်စရာရှိတဲ့ အလုပ်တွေကိုသာ လုပ်နေခဲ့ပါတယ်… ၀န်ထမ်းတွေကြားမှာတော့ သူ့သားသုံးယောက်ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ အားပြိုင်မှုတွေ၊ အလုပ်ကြိုးစားမှုတွေဟာ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ၊ စောင့်ကြည့်စရာ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်..
နှစ်သစ်ကူးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ မိသားစုနဲ့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေအားလုံး နှစ်သစ်ကူးပွဲကျင်းပဖို့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါပြီ။ နှစ်သစ်ကူး ညစာစားပွဲ ကျင်းပပြီးချိန်မှာတော့ သူဟာ သူ့သားသုံးယောက်ကို ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်..
“ကဲ.. အချိန်ကျပြီ.. သားတို့ သေတ္တာထဲမှာ ဘယ်လိုအရာတွေ သိမ်းဆည်းထားတယ်ဆိုတာ အဖေ့ကို အသိပေးဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ.. ဒီတော့ တစ်ယောက်စီ သေတ္တာကို ယူပြီး ဖေဖေ့ကို လာပြကြပါ” လို့ သူက ကြေငြာလိုက်တော့ သားအကြီးဆုံးက အရင်ဆုံး ထိုင်ခုံကနေ ခုန်ထလိုက်ပြီး သေတ္တာထဲကနေ လယ်ဂျာစာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်.. “ဖေဖေ... စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ စာရင်းအင်းတွေလောက် အရေးကြီးတာ ဘာများ ရှိတော့မှာလဲ.. ဒီ စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစာရင်းတွေ၊ အရှုံးအမြတ် စာရင်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံး တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ အဓိက အကြောင်းအရာတွေဘဲ မဟုတ်လား” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်.. ဒီတော့ သူက ခေါင်းတစ်ချက် ညိတ်လိုက်ပြီး “အင်း.. ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ထိရောက်တဲ့အချက်ပါဘဲ ” လို့ ပြောလိုက်ပြီး ဒုတိယသားကို လက်ညှိုးညွှန်လိုက်ပြီး “ကဲ.. သား မင်းရဲ့ သေတ္တာရော ” လို့မေးလိုက်ပါတယ်..
“အပြင်ဘက်က ထရပ်ကားပေါ်မှာပါ ဖေဖေ.. ဒါပေမဲ့ ဖေဖေပေးတဲ့ သေတ္တာနဲ့ မဆန်အေ့ာင် ကျွန်တော်ပြမဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ များလွန်းလှပါတယ်... ကျွန်တော့်ရဲ့ အလုပ်သမားတွေက ပစ္စည်းတွေကို သယ်ယူလာဖို့ အပြင်ဖက်မှာ အဆင်သင့် စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်..” လို့ သူ့သားက ပြန်ပြောလိုက်တော့ သူက ပြူတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ဖက်ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မြင်တွေ့လိုက်ရတာက ထရပ်ကားကြီးတွေပေါ်မှာတော့ အင်မတန်လှပတဲ့ ဇိမ်ခံရွက်လှေတစ်စီး၊ တန်ဖိုးကြီး အနုပညာလက်ရာမြောက် ပန်းချီကားများ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ စတာတွေနဲ့ အတူ သူပေးလိုက်တဲ့ သေတ္တာကိုတော့ တူညီဝတ်စုံဝတ်ဆင်ထားတဲ့ အစောင့် ၂ယောက်က သတိကြီးစွာနဲ့ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်..
“သေတ္တာထဲမှာ ဘာတွေ ပါသလဲ” လို့ ဒုတိယသားကို သူကမေးလိုက်ပါတယ်.. “ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ လက်ဝတ်ရတနာတွေပါ ဖေဖေ.. ကုမ္ပဏီတစ်ခု တည်ထောင်ဖို့ဆိုတာ ငွေရေးကြေးရေးက အရေးအကြီးဆုံး မဟုတ်လား.. ကျွန်တော်တို့မှာ ဒီပစ္စည်းတွေ ရှိနေရင် ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ငန်းကြီးကို လည်ပတ်လို့ ရနေပြီလေ.. ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ငွေဖြစ်မဲ့ ဒီပစ္စည်းတွေက အရေးကြီးတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်အဖေ…. ပစ္စည်းတွေ ဒီကိုယူလာဖို့ ကျွန်တော် အမိန့်ပေးလိုက်ရမလား ဖေဖေ” လို့ ပြန်မေးတော့ “မလိုတော့ပါဘူးကွာ.. ဖေဖေ မြင်ပြီးပြီဘဲ.. နေပါစေ.. ရပါပြီ” လို့ သူက ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်..
သူ.. သက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက် ချလိုက်မိပါတယ်.. သူ့မျက်နှာပေါ်မှာတော့ စိတ်မကောင်းတဲ့ အရိပ်အယောင်တွေ ထင်ဟပ်နေခဲ့မယ် ထင်ပါတယ်.. သူ.. တတိယသားဘက်ကို လှည့်လိုက်ပြီး “ ကဲ .. သားကရော .. ဘာတွေများ တန်ဖိုးထားတာတွေ ယူလာခဲ့သလဲ ” လို့ မေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီတော့ သူ့သားအငယ်က ထိုင်ရာက ထလိုက်ပြီး လက်ထဲက သေတ္တာကို သူ့ဆီ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်.. သူ သေတ္တာလေးကို ဖွင့်လဲကြည့်လိုက်ရော အထဲမှာ မြင်လိုက်ရတာက ဘာဆိုဘာမှ မရှိတဲ့ အလွတ်သက်သက်မျှသာ…
“ ဟင်.. ဘာမှလည်း မရှိပါလား.. ဒါဆို သားဆိုလိုတဲ့သဘောက ဖေဖေရဲ့ ဒီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာ တန်ဖိုးထားစရာဆိုလို့ တစ်ခုတစ်လေတောင် မရှိဘူးဆိုတဲ့ သဘောလား” သူ အံ့အားသင့်သလိုနဲ့ မေးလိုက်တော့
“ဒီသဘောရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ ဖေဖေ.. ကျွန်တော် တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေဟာ ဒီသေတ္တာနဲ့ ထည့်လို့ ဆန့်နိုင်မှာ မဟုတ်သလို ထရပ်ကားကြီးတွေနဲ့လည်း သယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး… ပြီးတော့လည်း စာရင်းအင်းတွေအပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားတဲ့ လယ်ဂျာစာအုပ်ထဲမှာလည်း ထည့်သွင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး.. ”
သားစကားကို ကြားရတော့ သူ့မျက်နှာ ၀င်းခနဲတစ်ချက်လက်သွားပြီး သူပြုံးလိုက်မိတယ် ထင်ပါတယ်.. ပြီးတော့ သူထိုင်နေတဲ့ ခုံကို ပြန်သွားပြီး ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်..
သူ့သားအငယ်က ဆက်ပြီး ပြောနေခဲ့တယ်.. “ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံး အောင်မြင်လာဖို့အတွက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်ကြသူတွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ အရည်အချင်း၊ ရိုးသားမှု၊ စတာတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုပေတံတွေနဲ့ တိုင်းတာမလဲ.. အဲဒါတွေကို ဘာနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်ကြမလဲ အဖေ.. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ဖောက်သည်တွေ၊ စီးပွားဖက်တွေရဲ့ သစ္စာရှိမှုနဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တိုင်းတာမလဲ အဖေရယ်.. ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အလှူဒါနတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စရပ်တွေ အဲဒါတွေကိုရော ဘာနဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်ရမလဲ။ အဖေ.. သေတ္တာလေးထဲကို ပြန်ကြည့်ပါဦး.. အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေ၊ ဖောက်သည်တွေ ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးရှိကြတဲ့ အပြန်အလှန် ယုံကြည်အားထားမှု၊ သစ္စာရှိမှု၊ မေတ္တာစေတနာထားမှု စတဲ့အရာတွေ ရှိနေပါတယ်.. အဲဒါတွေဟာ ဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးမှာ ကျွန်တော် တန်ဖိုးအထားဆုံး အရာတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ် အဖေ.. ”
သားအငယ်စကားကို နားထောင်ရင်း သူနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ပြုံးလိုက်ပါတယ်.. သူ့သားရဲ့ သေတ္တာအလွတ်ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့အရာတွေဟာ ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ခေါင်းဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အသိဆုံးဘဲမဟုတ်လား.. အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်လုပ်ရမဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်အောက်က လူတွေ၊ ၀န်ထမ်းတွေ၊ ကိုယ်နဲ့ စီးပွားဖက်၊ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ ယုံကြည်အားထားမှု၊ လေးစားချစ်ခင်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်းရွက်မှု၊ သစ္စာရှိမှု ဆိုတဲ့အရာတွေမပါဘဲ၊ အဲဒီအရာတွေကို တန်ဖိုးမထားတတ်ဘဲနဲ့ ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နိုင်ဖို့ ၊ အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ မလွယ်ကူမှန်း သူ့သားအငယ်က ကောင်းမွန်စွာ သဘောပေါက်သူ ဖြစ်ပါတယ်. ဒီတော့ ဘယ်သူဟာ သူရဲ့ နေရာကို ဆက်ခံသင့်တဲ့သူလည်း ဆိုတာ အားလုံးရှေ့မှာ သိသာထင်ရှားစွာ ရွေးချယ်နိုင်ပြီ မဟုတ်ပါလားလေ…
Bob Perks ရဲ့ I Hope Your Box Is Empty ကို နှစ်သက်စွာ ဘာသာပြန်ပါသည်။
photo from http://www.flickr.com/photos/moderndomestic/2863607993/
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Thursday, December 16, 2010 Thursday, December 16, 2010 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ဒီနေ့တော့ စောင်းလျားသီးမမှည့်တမှည့်လေးတွေကို ငပိချက် ချက်စားဖြစ်ပါတယ်.. စောင်းလျားသီးကို ဟင်းချက်စားကြသူ နည်းပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အညာက လက်ဖက်တွေမှာ ထည့်နှပ်ကြတာတော့ စားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်.. စောင်းလျားသီးမှည့်ရဲ့ အရသာဟာ ချိုသလိုချဉ်သလို ရှိပြီး ပါးစပ်ထဲမှာ ခပ်မွှေးမွှေးလေး ရှိပါတယ်.. ကျွန်မ ချက်စားဖြစ်တဲ့ ငပိချက်ချက်နည်းလေးကို မျှဝေပါမယ်နော်..
ဒါလေးက ငပိချက်ချက်မဲ့ စောင်းလျားသီးလေးတွေပါ.. ဟင်းချက်လိုက်ရင် ပိုမွှေးအောင်လို့ မမှည့်တမှည့်လေးကို ရွေးလာပါတယ်..
Star Fruit ဆိုတဲ့အတိုင်းပါဘဲ ခုလိုလေးဆို ကြယ်လေးတွေလို လှလို့
ပြီးသွားရင်တော့ ခုလို နှုတ်နှုတ်လေး စင်းလိုက်တယ်လေ.. အစေ့တွေကိုတော့ ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါနော်..
ကြက်သွန်ဖြူနီ၊ချင်း တို့ကို အရောင်တင်မှုန့် ဆနွင်းမှုန့်တို့ဖြင့် ဆီသတ် ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၃လုံး၎လုံးကို တောက်တောက်စင်းထားတာကိုထည့် .. ခရမ်းချဉ်သီးတွေ ထည့်ပြီးတာနဲ့ စောင်းလျားသီးတွေကို ထည့်ပြီး ရောသမမွှေလိုက်ပါတယ်..
ငပိကွမ်းသီးလုံးလောက် ခန့်မှန့်ပြီးထည့်.. ငပိချက်ဆိုတော့ နည်းနည်းများပစေပေါ့နော်.... ပုဇွန်ခြောက် အလောတော်ကို ထောင်းပြီးထည့်ပါတယ်.... ငံပြာရည်၊ အချိုမှုန့်ထည့်.. ထို့နောက် ရေတွေခမ်းခြောက်ပြီး ဆီပြန်လာတဲ့အထိ မီးဖိုပေါ်ထားပါတယ်.. ကျက်ခါနီးမှ ငရုပ်သီးစိမ်းတွေ အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီး ထည့်ပါတယ်.. ပြီးရင် လက်ကလည်း မွှေပေးနေဖို့လိုပါသေးတယ် မဟုတ်ရင်အိုးကပ်သွားမှာ စိုးလို့ပါ.. ရေလုံးဝ ခမ်းပြီး ဆီတွေပြန်လာတော့မှ အရသာမြည်းပြီး အိုးကိုချလိုက်ပါတယ်..
ခံတွင်းပျက်သူတွေအတွက် စောင်းလျားသီး ငပိချက်ပါ..
ကဲ.... ကျက်ပါပြီ.. လျှာရင်းမြက်စေမဲ့ စောင်းလျားသီးငပိချက်ပါ.. အပေါ်က နံနံပင်လေးအုပ်ပေးလိုက်ရင် စားချင်စဖွယ်ဖြစ်ပါပြီ.. စောင်းလျားသီးအမှည့်ဟာ ချဉ်ပြီး ချိုတဲ့အရသာရှိသလို၊ မွှေးတဲ့အနံ့လေးလည်း ရှိပါတယ်.. ဒါကြောင့် စောင်းလျားသီး ငပိချက်ရဲ့အရသာဟာ ချိုချိုမွှေးမွှေးလေးနဲ့ လျှာဖျားမှာ အရသာ သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်.. ခံတွင်းပျက်နေသူများ၊ ဘာစားစား စားမ၀င်ဖြစ်နေသူများအတွက် စောင်းလျားသီးဟာ ခံတွင်းမြိန်စေတဲ့ ဆေးတစ်လက်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်.. ဒါကြောင့်လည်း စောင်းလျားသီး ငပိချက်လေးကို စားရင် လျှာရင်းမြက်ပါလိမ့်မယ်လို့ ကြော်ငြာဝင်လိုက်ပါတယ်နော်..
စောင်းလျားသီးငပိချက်ကို ခုလို အတို့အမြုပ် အစုံအလင်နဲ့ စားရင် ထမင်း သုံးပန်ကန်တော့ အသားလေး ၀င်သွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။ :) :)
နောက်ထပ် မျှဝေမဲ့ ဟင်းတစ်မည်က ၀က်သားမုန်ညင်းချဉ်ပေါင်းပါ.. အဆီအသားအခေါက်ပါ ပါတဲ့ သုံးထပ်သားလို အသားမျိုးကို ရွေးချယ်ပါတယ်.. ပြီးသွားရင် အောက်က အတိုင်း ပါးပါးလေး လှီးပါတယ်..
၀က်သားကို ဆား၊ ငံပြာရည်အကြည်၊ ချောက်ကောပါကော၊ ဟင်းချက်ဝိုင် (အရက်အနည်းငယ်) ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ချင်းအရည်တို့ဖြင့် ရောနယ်ပြီး အချိန်အနည်းငယ် ထားပါတယ်..
ဒါကတော့ မုန်ညင်းချဉ်ပါ.. ဓားနဲ့ ခပ်သေးသေးလှီးထားပြီး ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူနီ၊ နံနံ ၊ ငရုပ်သီး ၊ ဆီမွှေး(နှမ်းဆီ) အချိုမှုန့်၊ ငံပြာရည်အကြည် တို့ဖြင့် ရောနယ်ထားပါတယ်..
အစောက ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ၀က်သားပြားလေးတွေကို ပန်းကန်လုံးတစ်ခုထဲ ခုလို ဖြန့်ခင်းလိုက်ပါတယ်.. အခေါက်ရှိရာဘက်ကို အောက်ဖက်ကို ထားလိုက်ပါတယ်..
ပန်းကန်ရဲ့ အလယ်မှာ မုန်ညင်းချဉ်တွေကို ခုလို သိပ်ပြီး ထည့်လိုက်ပါတယ်.. လက်ကလေးနဲ့လည်း ဖိပေးပေါ့နော်.. ပြီးတော့ .....
ရေနွေးဆူဆူမှာ ခုလို ပန်းကန်လေးကို ထည့်လိုက်ပြီး အဖုံးလေးအုပ်လို့ မိနစ်၂၀ နီးပါး ပေါင်းလိုက်ပါတော့တယ်.. ရေခမ်းရင် ထပ်ထည့်ပေးဖို့ သတိထားပါ.. မဟုတ်ရင် ပန်းကန်လုံးပါ မီးတူးသွားနိုင်ပါတယ်.. ပေါင်းရမဲ့ အချိန်ကိုတော့ အတိအကျ မပြောလိုပါ.. ၀က်သားနူးအိမအိကို စမ်းကြည့်ပြီး နူးရင်ချလို့ ရပါပြီ..
ခုလို ပန်းကန်ပြားလေးထဲကို အသားလေး မှောက်ချလိုက်ရင် စားချင်စဖွယ် ၀က်သား မုန်ညင်းချဉ်ပေါင်း ရပါပြီ.. အပေါ်မှာတော့ ၀က်သားပြားလေးတွေ ဖုံးနေပြီး အောက်မှာတော့ မုန်ညင်းချဉ်တွေ ရှိနေပါတယ်.. အပေါ်က နံနံပင်လေး၊ ငရုပ်သီးစိမ်းလေး အလှဆင်လိုက်ရင် လှလဲလှ ၊ စားလို့လဲကောင်းတဲ့ ၀က်သား မုန်ညှင်းချဉ်ပေါင်းတစ်ခွက် ရပါပြီ.. ၀က်သားပန်းကန်ကို ပေါင်းအိုးထဲက ထုတ်လိုက်ချိန်မှာ ပန်းကန်လုံးထဲမှာ အရည်တွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်.. အဲဒီအရည်တွေကို ခွက်တစ်ခုထဲ ငှဲ့ထည့်ထားပြီး မုန့်ညင်းချဉ်တွေကိုတော့ လက်ကလေးနဲ့ အသာပြန်ဖိထားပြီး မှောက်ချလိုက်ချိန်မှာ ခုလို ပုံမပျက်လေး ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
ဧည့်သည်လာရင် ဒီဟင်းနဲ့ ပုံမှားရိုက်လို့ရတယ်.. ဟင်းခွက်က ကြီးနေပြီး အပေါ်မှာ ၀က်သားက နည်းနည်းလေး .. အောက်မှာတော့ မုန်ညင်းချဉ်တွေ... ဟိဟိ ဧည့်သည်ကတော့ စားရချည်သေးရဲ့ ၀က်သားတွေအများကြီးလို့ တွေးနေမှာ သေချာတယ်... :) :)
ကျွန်မတို့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ စကိုင်းတိုင်းတစ်ဝိုက်မှာ မှိုကပ်ဆိုတဲ့ သစ်တုံးအဆွေးတွေမှာပေါက်တဲ့ မှိုတစ်မျိုးပါ.. အဲဒီမှိုကို ငှက်ပျောဖက်နဲ့ထုပ်ပြီး ပေါင်းစားပါတယ်..အဲဒါလေးကို ဝေမျှပါဦးမယ်.
ကြက်သွန်ဖြူ၊ချင်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုပ်သီးစိမ်း၊ နံနံ၊ ဆားအချိုမှုန့်၊ ငပိကိုအရည်ဖျော်ပြီးထည့်၊ ဆီအနည်းငယ် ထည့်ပြီး ရောမွှေပါတယ်..
ဆန်မှုန့်( မုန့်နှစ်) အတော်များများကို ထည့်ပြီး ရေအနည်းငယ်ထည့်ကာ ရောနယ်ပါတယ်.. ဆားအပေါ့အငံကို လျှာဖျားလေးဖြင့်မြည်းပါတယ်..
ငှက်ပျောဖက်ကို နေအနည်းငယ်ပြ၊ သို့မဟုတ် မီးကင်ပြီး ဖက်များ ပျော့ပြောင်းသွားအောင် လုပ်ပြီး မှိုကပ်များကို အနေတော် မှန်းပြီးထည့်ပါတယ်..
ရလာတဲ့ အထုပ်လေးတွေကို Rice Cooker တွင်ပါသော ဇကာလေးထဲ စီထည့်လိုက်ပါတယ်..
Rice cooker အောက်မှာ ရေဆူအောင်တည်ပြီး ပုံပါအတိုင်း ပေါင်းလိုက်ပါတယ်.. နာရီဝက် ကျော်ကြာအောင်ပေါင်းလိုက်ပါတယ်..
ကျက်သွားချိန်တော့ ဒီလိုလေးပေါ့နော်.. မွှေးကြိုင်တဲ့ မှိုကပ်ပေါင်းပါ.. ဒီနည်းအတိုင်း မုန်ညင်းပေါင်း၊ ဟင်းရွက်စုံပေါင်း တို့ကိုလည်း လုပ်စားနိုင်ကြပါတယ်ရှင်...
ချဉ်ပေါင်သီးထောင်းတဲ့နည်းကို ပြောပြပါဦးမယ်ရှင်။ ချဉ်ပေါင်သီးကို ဆန်လှော်ချက်စားလို့ ရသလို ထောင်းစားလို့လည်း ရပါသေးတယ်..
ဒီလိုချဉ်ပေါင်သီးတွေကို အပေါ်က အခွံနီတွေကို ယူပြီးရေစင်အောင် ဆေးပါတယ်.. ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ ငရုပ်သီးစိမ်းကို ထောင်း ချဉ်ပေါင်သီးများကို ငရုပ်ဆုံထဲထည့်၊ ငပိ၊ ပုဇွန်ခြောက်တို့ပါထည့်ပြီး ထောင်းပါတယ်.. ဆားအချိုမှုန့်ထည့်၊ နံနံပင်ထည့်ပြီး အပေါ့အငံမြည်းလို့ အရသာအနေတော်ဆိုရင် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ချဉ်ပေါင်သီးထောင်းကို ရပါပြီ.. ထမင်းမြိန်စေတဲ့ ချဉ်ပေါင်သီးထောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြောင်းဖူးကို အစေ့ခြွေပြီး ဘလင်ဒါ ( Blender) ဖြင့် ညက်အောင်လုပ်လိုက်ပြီး ရေနွေးဆူအောင်တည်ပြီး ဆား၊အသားမှုန့် ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ရိုက်ပြားထည့်ပြီး ရေနွေးဆူလျှင် ပြောင်းဖူးများကိုထည့်ပါတယ်.. ချခါနီးတွင် မုန်ညင်းဖြူ ( အခါးမဟုတ်) များကို ထည့်ပြီး ချလိုက်ရင် ပြောင်းဖူး မုန်ညင်းဟင်းချို ရပါတယ်..
မုန်လာဥချဉ်ရည်ကိုတော့ လူတိုင်းချက်တတ်ကြမှာပါနော်... ဒါပေမဲ့ ဟင်းမချက်တတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ ညီမလေး၊ မောင်လေးများအတွက် ချက်နည်းကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်.. မုန်လာဥကို အတုံးအရွယ် တော်လေးများ ပြုလုပ်ပြီး ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူ၊ ငပိ၊ ပုဇွန်ခြောက်ထောင်းထည့်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုပ်သီး၊ အရောင်တင်၊ ဆား၊အချိုမှုန့်၊ ဆနွင်းမှုန့်၊ မက်လင်သီး ၊ဆီ အနည်းငယ် တို့ကို တစ်ခါတည်း ချက်မဲ့အိုးထဲကို ထည့်ပါတယ်.. မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး ဟင်းအိုးကို အနည်းငယ်လုံးချက်ချက်ပြီး ရေထည့်ပါတယ်..မုန်လာဥကို ငါး၊ ငါးခေါင်းတို့နဲ့လည်း အချဉ်ရည်ကျိုတတ်ကြပါတယ်..
ရေဆူအောင်၊ ရေခန်းအောင် တည်
ရေခမ်းပြီး ဟင်းအိုးကျပြီဆိုရင် အပေါ့အငံ၊ အချဉ်အရသာမြည်းလို့ ကြက်သွန်မြိတ်၊ နံနံပင်ကြိုက်ရာခတ်လိုက်ရင် မုန်လာဥ အချဉ်ရည်ဟင်းတစ်ခွက် ရပါပြီရှင်...
ဒါလေးက ကချင်ပြည်နယ်မှာ အသုံးများတဲ့ မက်လင်သီးခြောက်ပါ.. အချဉ်ရည်ဟင်းထဲ ထည့်ချက်စားသလို ကြက်သား ကချင်ချက်ဆိုရင်လည်း ထည့်ပါတယ်.. ရေနွေးဆူဆူမှာ ကြက်သွန်ဖြူ ချင်းငရုပ်သီးစိမ်းလေးနဲ့ ဆွန်ထန်လိုမျိုးလည်း ဟင်းရည်လုပ်သောက်လို့ရပါတယ်.. ရှမ်းပြည်နယ်မှာတော့ မက်ခေါက်သီးနဲပ ချဉ်စော်ခါးသီးအခြောက်ကို အသုံးများပါတယ်.. ပုံစံဆင်သလိုရှိပြီး အရသာလည်း သိပ်မကွဲပါဘူး....
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Sunday, December 05, 2010 Sunday, December 05, 2010 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ရှိရာ မြို့ကလေးဆီ အလည်သွားကြပါတယ်.. မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းက အစားအသောက်တစ်မျိုးနဲ့ ကျွေးမွေးဧည့်ခံပါတယ်.. အမှန်တော့ အဲဒီအစားအသောက်ကို စားချင်တာကြောင့်လည်း သူ့ဆီသွားလည်တာပါလို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်.. ဘာလို့ဆို အဲဒီအစားအသောက်က ဆိုင်တွေမှာ သိပ်တွေ့ရလေ့မရှိတဲ့ ရှားရှားပါးပါး တိုင်းရင်းသား အစားအသောက် တစ်မျိုးဖြစ်လို့ပါ။ အဲဒါကတော့ မိုင်းသာရှမ်းလူမျိုးတွေရဲ့ မြီးရှည် ဖြစ်ပါတယ်.. ရှားရှားပါးပါးဖြစ်တဲ့ ဒီမြီးရှည်လုပ်နည်းကို သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ လုပ်စားဖြစ်ခဲ့တာလေး အတိုင်း ပြန်လည် ဝေမျှပါဦးမယ်...
မိုင်းသာမြီးရှည်အခြောက်တွေကို ရေစိမ်ပါတယ်.. ထူးခြားတာက ရိုးရိုး မြီးရှည်အဖြူရောင်မဟုတ်ဘဲ အနီရောင်လေး ဖြစ်နေတာပါ.. ဒါပေမဲ့ အနီရောင်မဟုတ်လဲ အဖြူရောင်နဲ့လည်း လုပ်စားကြပါတယ်.. မိုင်းသာမြီးရှည်ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်နော်..